Apple Music very ny lohan'ny R & B sy Hip-Hop, mandeha amin'ny Spotify | Avy amin'ny mac aho
Mandra-pahatongan'ny orinasa soedoà Spotify, mbola tsy naseho ampahibemaso, dia mbola tsy hitantsika tao anatin'ny fotoana fohy ny vaovao mifandraika amin'ny serivisy fitaterana mozika malaza manerantany. Amin'ny 24 aprily, ny orinasa soedoà dia nanomana hetsika izay hanolorany, saika azo antoka, fitaovana mahaleo tena vaovao hahafahany mihaino mozika ao anaty fiara, tsy mila ny finday avo lenta.
Saingy toa tsy izany irery no zava-baovao, satria tao anatin'ny ora farany dia betsaka no voalaza momba ny mety hisian'izany Spotify dia manolotra fampiharana vaovao ho an'ny finday Amin'ny alalànay no hanananay fidirana bebe kokoa amin'ny atiny rehetra izay natolotry ny orinasa tato anatin'ny volana vitsivitsy. Saingy tsy io irery no hetsika, satria ankoatr'izay, ny lohan'ny R & B sy Hip-Hop an'ny Apple Music dia nizotra nankany amin'ny Spotify.
Carl Chrey, tompon'andraikitra amin'ny atiny aseho ao amin'ny fizarana R & B sy Hip-Hop ao amin'ny Apple Music no tompon'andraikitra tamin'ny Apple afaka nahazo manokana nandritra ny roa herinandro voalohany, ilay rakikira «Boky fandokoana», fifanarahana manokana tsy maintsy nandoavany 500.000 $.
Hafa amin'ny zava-bitan'i Carl Chrey, hitantsika izy ao amin'ny Lisitry ny playlist Hip-Hip sy R&, ankoatry ny fampidirana mpanakanto toa an'i Cardi B, Post Malone ary HER Amin'ny toerany vaovao ao Spotify dia azo inoana kokoa fa ho tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny atin'ny lisitry ny famokarana RapCaviar izy.
Marihina fa ny mpitantana R & B teo aloha an'ny Spotify nandao ny orinasa handeha ho any YouTubeNoho ny maha-zava-dehibe an'ity atiny ity dia voatery nifindra haingana ilay orinasa soedoa mba hahitana ilay mpisolo tena voaomana indrindra. Carl Chrey dia nanomboka niasa tao amin'ny Apple tamin'ny 20014, rehefa nividy Beats $ 3.000 tapitrisa i Apple. Niasa tamin'ny mpanao gazety mozika ho an'ny XXT sy BET izy teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple Music very ny lohan'ny R & B sy Hip-Hop, mandeha any Spotify